हप्तामा कति पटक यौनसम्पर्क गर्नु उचित, जानौं! – Dainiki Sarokar
२०७७ फाल्गुन २८, शुक्रबार ०७:२६
यौन सम्पर्क गर्नुको एक होइन अनेक फाइदा छन् । शरीरका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि सेक्स निकै लाभकारी मानिन्छ । नियमित सेक्स गरिरहनाले विभिन्न रोगबाट जोगिन मद्दत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन विभिन्न अध्ययनका अनुसार नियमित यौन…
यौन सम्पर्क गर्नुको एक होइन अनेक फाइदा छन् । शरीरका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि सेक्स निकै लाभकारी मानिन्छ । नियमित सेक्स गरिरहनाले विभिन्न रोगबाट जोगिन मद्दत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन विभिन्न अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्पर्क गर्नाले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्छ । साथै यौन सम्पर्कले मुटु बलियो हुने र तनावको खतरालाई पनि कम गर्छ ।
सेक्समा यो कमी विवाहितहरुमा धेरै भएको पाइयो, जो सँगै हुन्थे । तीनमा प्रत्येक वर्ष १६ पटक सम्म कम हुँदै गयो ।
कामलाई धेरै समय दिने र नियमित उत्तरदायित्वलाई सम्हाल्नु यसको मुख्य कारण भएको देखियो । साथै इन्टरनेटमा भएका मनोरञ्जनका साधनहरुका कारण पनि खालि समय नहुनाले कमी आएको भेटियो ।
जानौंं, सेक्सको औसत समय
यो तथ्यको मतलव यो पक्कै पनि होइन कि हामी यस्तो युगमा बाचिरहेका छौं जहा यौन सम्पर्क हुँदैन । किनकी औसतन एक एडल्ट सालमा ५४ पटक सम्म यौन सम्पर्कको आनन्द लिन्छन् । यसको मतलव हो की हप्तामा एक पटक भन्दा केही बढि । त्यहि एक साथ रहने विवाहित जोडि ालमा ५१ पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्ने गर्छन् ।
के यो गलत हो ?
के यो तथ्यांक गलत हो ? बिलकुलै होइन । सेक्स कति पटक गरिदैछ, यसले त्यो बेला सम्म फरक पर्दैन जब सम्म तपाईं र तपाईंको पार्टनर यसले सन्तुष्ट हुन्छन् । अध्ययनकर्ताका अनुसार हप्तामा एक पटक यौन सम्पर्क गरेर खुशी रहन सकिन्छ ।
एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु पर्छ
उसो त हफ्तामा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्नाले सम्बन्धमा सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठीक मानिन्छ भने हफ्तामा एक पटक भन्दा धेरै सेक्स गर्नाले त्यति धेरै खुशी नमिल्न नि सक्छ जति एक पटकको यौन सम्पर्कले दिन्छ । यदि तपाईं धेरैपटक यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेशनेसका लागि तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहनुपर्छ ।’
सबैभन्दा उच्च सेयर मूल्य भएका सेयर बजारका ६ कम्पनी